Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tambajotra fizahan-tany eran-tany: tsy ampy ny fitsipika COVID-19 vaovao ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana
Ny fahatongavana any Etazonia any Etazonia avy any amin'ny firenena vahiny dia midika fitsapana COVID-19 tsy maintsy atao ao anatin'ny 3 andro alohan'ny hidirany amin'ny sidina amerikana. Ity fitsipika CDC vaovao ity dia tsy ampy raha ny tambajotran'izao tontolo izao.
Mba hampihenana ny fampidirana sy fanaparitahana ireo karazan-karazany vaovao an'ny SARS-CoV-2, dia namoaka Order (PDF) manomboka ny 26 Janoary 2021.
Takiana ny mpandeha an'habakabaka rehetra tonga any Etazonia avy any amin'ny firenena vahiny mba hizaha toetra ny aretina COVID-19 tsy mihoatra ny 3 andro alohan'ny hiaingan'ny sidina ary hanome porofon'ny vokatra ratsy na antonta-taratasy voarindra tamin'ny COVID-19 mankany amin'ny zotram-piaramanidina alohan'ny hidirany amin'ny sidina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity fitakiana fitsapana ity dia jereo Fanontaniana Fametraky ny Olona.
Ny State of Hawaii no fanjakana voalohany nitaky lalàna toy izany koa ho an'ny sidina anatiny avy any amin'ny tanibe Etazonia. ny Aloha Ny fanjakana dia nahomby tamin'ny fitazonana ny fiparitahan'ny COVID-19 ho voafehy.
Ilay avy any Hawaii Tambajotra fizahan-tany manerantany Mpanorina, Juergen Steinmetz, dia nilaza hoe: “Faly izahay fa nandray izany dingana lehibe izany ny governemanta amerikana, saingy mety tsy ampy izany.
“Ao anatin'ny toe-javatra mampidi-doza ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny fahasalamana eto amin'ity firenena ity dia mihodinkodina ambany hatrany amina 400,000 amerikana maty noho ny virus coronavirus. Ny fitondrana Trump dia namela ny fahatongavana tsy nisy fitsapana COVID-19 nandritra ny fotoana ela. Tsy takatry ny saiko izany.
“Gaga ihany koa aho hoe maninona no tsy napetraka ny lalàna mifehy ny sidina anatiny. Ny fitsapana haingana dia tsy lafo ary misy be. Ny fitsapana toy izany dia azo atao minitra alohan'ny sidina.
"Mila manampy ny indostrian'ny fizahan-tany izahay hanana fahatokisan-tena ho an'ny mpanjifany. Ny famelana ireo sidina hiainga any Etazonia miaraka amin'ireo mpandeha izay tsy voasedra dia mandefa hafatra diso ary mampidi-doza fotsiny. ”